Umatshini waphantsi, Umgangatho wokugaya, Umatshini wokuPolisha uMgangatho-iMarcospa
I-Suzhou Marcospa yasekwa ngo-2008. Ingcali kwimveliso yomatshini womgangatho, njenge-grinder, ipolishi kunye nomqokeleli wothuli. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ezisefashonini, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiintlobo ngeentlobo zokwakha, ayisiyiyo nje kuphela inyambalala ebanzi yentengiso yasekhaya, kodwa ithunyelwa eYurophu naseMelika.
Ihinji kaMarcospa kule minyaka ihleli ibambelele “kumgangatho weemveliso ukuze uphile, ukuthembeka kunye neenkonzo zophuhliso” ngeenjongo zeshishini. Ukuzibophelela ekuboneleleni ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezisemgangathweni. Unobuchule, iqela elizinikeleyo kulawulo loyilo, kuyilo lwemveliso, ukwenziwa kwesikhunta, ukubumba kwindibano yeMveliso, kwinkalo nganye kunye neenkqubo kuvavanywa ngokuqatha nolawulo ...
Iimveliso zisebenzisa itekhnoloji ezenzekelayo esebenza kakuhle ngakumbi, yomelele ngakumbi, yokonga ixesha kwaye elula.
Ukusetyenziswa kwamandla emveliso kusezantsi, kodwa kunye nokugcina umgangatho wokumelwa kwemveliso.
Imigangatho yetekhnoloji yemveliso ibe lishishini, ngakumbi ishishini elinobuchwephesha obuphezulu, iindawo eziphakamileyo zokuyalela.
Ufumene uninzi lwengqwalaselo yeshishini kwimfundo ebalulekileyo kunye nokuqondwa.
X uthotho lwesahlulo senkanyamba
I-T9 uthotho lwesigaba esithathu se-HEPA
C5 uthotho isigaba ezintathu uhlobo umile industria ...
Uluhlu lwe-FB uthotho lwesithathu sokuqhushumba ubungqina bendawo ...
Umatshini wokucoca ngesantya esiphezulu udlala njani indima yawo kumgangatho wekhonkrithi
Ngomhla wama-23 ukuya ku-2021
Inkqubo yesicelo somatshini wokucoca ngesantya esiphezulu ① Phanda imeko eyiyo yomhlaba kwaye uqwalasele isidingo sokulawula ingxaki yesanti. Kuqala, faka into ephilisayo emhlabeni ukomeleza isiseko sobunzima bomhlaba. Sebenzisa ii-grinders ezisindayo ezili-12 kunye neentsimbi ...
Ukusebenza komatshini wokugaya womgangatho wekhonkrithi kubandakanya: ukugaya ububanzi, imo yokusebenza kwentloko, isantya sokujikeleza, ukugaya iyunithi yentloko, uxinzelelo lwevolthi yamanzi, njl njl. Imigangatho yokwakha yahlulwe: ukucaba, ukucaca kunye nokukhanya. 1. Igr ...
Ungayisebenzisa njani i-grinder yomgangatho ukujongana nepeyinti yomgangatho ngaphambi kokwakha
Qinisekisa kwaye uphucule ukunamathela kwipeyinti yomgangatho: Umgangatho ophathwayo wekhonkrithi unokuvumela ipeyinti yokuqala yomgangatho ukuba ingene ngaphezulu kumphezulu wekhonkrithi, nenendima ebalulekileyo kubomi benkonzo yento yonke yokwaleka kwepeyinti. Ngokukodwa xa kukho amabala eoyile kunye namanzi kwi ...